Xukuno dil ah oo saakay lagu fulliyay labo nin oo dambiyo kala duwan lagu soo eedeeyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xukuno dil ah oo saakay lagu fulliyay labo nin oo dambiyo kala duwan lagu soo eedeeyay
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Buq-Aqable ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kooxda Al-shabaab ay saakay labo xukun kala duwan oo dil ah ku fuliyeen labo nin oo dambiyo kala duwan lagu soo eedeeyay.
Labadaasi nin ayaa midkood lagu dilay dhagax kadib markii lagu soo eedeeyay in isagoo hore guur usoo maray uu kufsaday haweeney ka mid ah dadka ku nool magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Ninkaasi oo 29 jir ah laguna magacaabi jiray Axmed Ibraahim Raagoow ayaa lagu helay dambi ah inuu kufsi geystay islamarkaana dilay wiil la dhashay haweeneyda uu kufsaday.
Eedeysanaha dhagaxa lagu dilay ayaa intii ay maxkamaddu u socotay isku dayay inuu iska ka difaaco eedeynta loo soo jeediyay, balse ay u suurto gali weysay.
Sidoo kale, ninka kale oo 22 jir ahaa laguna magacaabi jiray Yuusuf Cali Bajiin ayaa isna lagu fulliyay dil toogasho ah kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ninka kufsiga geystay ka caawiyay dilka gabadha la kufsaday walaalkeed.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo ay Al-shabaab xukun dil ah ku fulliyaan qof ay kusoo eedeeyeen fal kufsi ah, waxaana inta badan dilalka ay ka fulliyaan deegaanada ay iyaga gacanta ku haayaan.